Soosaarayaasha Soosaarayaasha Lambiilaha - Shirkadaha Haysta Haysta Lambarrada iyo Warshadaha Shiinaha
Labajibaaran 5.5 inji dhererkeed oo hooska buluug ah
Magaca badeecada labajibaaran 5.5 inji dherer qaro weyn oo iftiin hooska cayiman Nooc 14 * 19.5cm 14 * 20.5cm 14 * 15.5cm Model Aluminium Moodeel NJ-22 Feature CN / EU / US / EN / AU, 5 xulashooyinka caadiga ah ee qalabka wax lagu buufiyo, ayaa ku habboon waddamada badankood. Haystaha laambiilaha, heerkul sare u adkaysta, waa la isticmaali karaa wakhti dheer. Lampshade gudaha dharka elektaroonigga ah, milki buuxa u leh isha ifka. Lampshade banaanka muraayadda dusha sare ee rinjiga, qurux iyo deeqsinimo leh. Haystaha laambadda waxaa la siiyaa kuleyl haysa ...
Haystaha toosan ee foosto
Magaca Badeecadda Weelka Barbaarta Gaarka ah Gaarka ah Gaarka midabka Fiilo korantada: 1.5m Qalabka Birta Madow NJ-20 Muuqaalka Haystaha Iftiinka Ceramic, heerkulka sare u adkeysta, wuxuu ku habboon yahay guluubka ka hooseeya 300W. Haystaha laambada waxaa loo wareejin karaa 360 digrii hadba sidii loo doono, taasoo ka dhigaysa mid aad u sahlan in la isticmaalo. Beddelka kantaroolka madaxbannaan, aamin ah oo ku habboon. Hordhac Haystaha laambadlaha aasaasiga ah wuxuu si gaar ah u yahay nalalka yaryar. Waxaa lagu rakibay heystaa laambarka 360 isku-hagaajin karo iyo wareejin madax-bannaan. Waa s ...
Hay haanta laambada hayaha
Magaca badeecada Haystaha nalka shaambada Gaarka ah Gaarka midabka fiilada korantada: 1.5m Qalabka Madow Birta / nalka nalka Model NJ-19 Muuqaalka Haystaha Iftiinka Ceramic, heerkulka sare u adkeysan, wuxuu ku habboon yahay guluubka ka hooseeya 300W. Jiirka birta aan xumuulka lahayn waa laaban karaa. Hagaajinta Knob waa la hagaajiyaa, waxaa loo isticmaali karaa terrarium ama baqashada alwaax ka yar 1.5cm. Beddelka kantaroolka madaxbannaan, aamin ah oo ku habboon. Hordhac Haystaha laambadlaha aasaasiga ah wuxuu si gaar ah u yahay nalalka yaryar. Ku rakiban 360 de ...
Nalka guud ee nalka
Magaca badeecada caalamiga ah ee hooska laambadda cayiman S 10 * 10.5cm L 14 * 14cm Qalabka Aluminium Model NJ-18 Feature CN / EU / US / EN / AU, 5 xirmooyinka caadiga ah iyo xulashooyinka cabbirka 2, waxay ku habboon yihiin waddamada intooda badan. Haystaha laambiilaha, heerkul sare u adkaysta, waa la isticmaali karaa wakhti dheer. Lampshade gudaha dharka elektaroonigga ah, milki buuxa u leh isha ifka. Lampshade banaanka muraayadda dusha sare ee rinjiga, qurux iyo deeqsinimo leh. Xagal la hagaajin karo, baaxadda ballaaran ee gaadhista. Hordhac ...
Magaca badeecada H-fiilaha iftiinka cadaynta Tilmaanta midabka 12 * 13 * 10cm Qalabka Birta Madowga Nel-16 Muuqaalka Muuqaalka La-habeyn karo, waxaa lagu dhejin karaa nalalka noocyo kala duwan leh, dabacsan oo habboon. Xagal la hagaajin karo, baaxadda ballaaran ee gaadhista. Habab kala duwan oo rakibo ayaa loo iswaafajin karaa iyadoo loo eegayo xaaladda. Hordhac Qaabeyn fudud oo wax ku ool ah, 3 qaab oo loo adeegsado. Boogaha ayaa lagu hagaajin karaa dusha sare ee baqashada dhalmada si loo habeeyo xagasha soo-gaadhista iyo masaafada si tartiib ah ...
Nooca Muuqaalka Laambada Cadceeda 10 * 14 * 12.5cm Qalabka Madowga Birta NJ-12 Muuqaalka Muuqaalka Muraayadda dusha sare leh, qurux badan oo loo habeeyay, anti-corrosion, ayaa la isticmaali karaa waqti dheer. Haystaha laydhka dhoobada hagaajin kara ee la-hagaajin karo, heerkul sarreeya, xagal khafiif ah ayaa lagu hagaajin karaa kolba. Dusha sare iyo dhinacba waxaa ku yaal dalool qaboojin ah, iyo hawadu kor iyo hoos ayey u socotaa, taasoo u horseedda kala-baxa kuleylka. Hordhac Nalalka noocan ahi waa m ...
Haystaha laambad dhaadheer
Magaca Badeecada Haystaha Iftiimiyaha Dheeraha ah Gaarka midabka Fiilo koronto: 1.2m dherer qafiif ah: 29.5cm Qalabka Madow Birta / nalka nalka NJ-11 Muuqaalka Haystaha Iftiinka Ceramic, heerkulka sare ee u adkeysiga, wuxuu ku habboon yahay guluubka ka hooseeya 300W. Haystaha laambada waxaa loo wareejin karaa 360 digrii hadba sidii loo doono, taasoo ka dhigaysa mid aad u sahlan in la isticmaalo. Dabayl gadaashiisa tuubbada laambadu kuleylkeeda ayey si dhakhso leh u sii deysaa. Jiirka birta aan xumuulka lahayn waa laaban karaa. Beddelka kantaroolka madaxbannaan, aamin ah oo ku habboon. Hordhac Laambadani ...
Haystaha iftiinka dheer ee la hagaajin karo
Magaca Badeecada Laambad dhaadheer oo cusub oo la habeyn karo Tilmaam midab leh fiilo koronto: 1.2m dherer qafiif ah: 29.5cm Qalabka Madowga Birta / Nalalka nalka NJ-10 Muuqaalka Haystaha Iftiinka Ceramic, heerkulka sare ee u adkeysiga, wuxuu ku habboon yahay guluubka ka hooseeya 300W. Haystaha laambada waxaa loo wareejin karaa 360 digrii hadba sidii loo doono, taasoo ka dhigaysa mid aad u sahlan in la isticmaalo. Dabayl gadaashiisa tuubbada laambadu kuleylkeeda ayey si dhakhso leh u sii deysaa. Jiirka birta aan xumuulka lahayn waa laaban karaa. Heerka korantada la bedeli karo si loo buuxiyo shuruudaha kala duwan ee r ...
Magaca badeecada Lampard Kaaliyaha Caddaynta Midabka ： 12 * 16cm Wareega ： 12 * 16cm Waxyaabaha Madow ee Birta ah NJ-09 Muuqaalka Lampshade dusha sare oo lagu buufiyay caag, dusha sare kama kuleyli doonto xayawaanka. Daboolida mesh waxaa loo habeeyay godad xariiq ah, oo si fudud loo isticmaali karo. Furitaanku wuxuu ku go'an yahay guga yar, kaas oo ku habboon oo qurux badan. Hordhac Nooca laambadhaafaha ah wuxuu ka samaysan yahay bir tayo sare leh, oo ku habboon dhammaan noocyada nalalka kuleylka ah ee ka hooseeya 16cm. Rakibaadda fudud, kaliya isticmaal 4 s ...